यी हुन् नयाँ शक्तिका बेरोजगार ‘ठूला नेता’ - Ratopati
भदौ ५ | नेत्र पन्थी
नमस्कारले बिगार्यो कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध
काठमाडौं– नयाँ शक्ति नेपालका तीन सह–संयोजक रामचन्द्र झा, महेश कर्मोचा र दुर्गा सोव बेलाबेला पार्टी मुख्यालय जान्छन् । जब बबरमहलस्थित नयाँ शक्तिको मुख्यालको गेटभित्र पस्छन्, त्यहाँ रहेका धेरै कार्यकर्ता सकेसम्म ‘नमस्कार’ गर्न नपरोस् भनेर अर्कोतिर फर्कन्छन् ।
आफ्नै पार्टीका दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहका नेता आउँदा कार्यकर्ताले किन मुन्टो बर्टाछन् ? यसको गजब घटन रहेछन् । सुरु सुरुमा सबै नेता–कार्यकर्ताले सम्मानसहित नमस्कार गर्थे । तर झा, कर्मोचा र सोवले हात नउठाई नमस्कार फर्काउँथे, सन्चो–बिसन्चो र सङ्गठनबारे केही कुरा नगरी सीधा आफ्नो कार्यकक्षमा जान्थे । ‘उनीहरुको यो स्वभाव देखेपछि नमस्कार गर्ने मन हरायो ।’ नयाँ शक्तिको मुख्यालयमा कार्यरत पार्टी कार्यकर्ताले सुनाए, ‘बरु बाबुरामले दुई हात जोडेर नमस्कार फर्काउँछन्, सह–संयोजकले ठूलोपन देखाउँछन् । कसरी नमस्कार गर्नु ?’ तीनै जना सह–संयोजकको कार्यकक्ष पहिलो तलामा छ, त्यहीँ नै बाबुरामको पनि कार्यकक्ष छ ।
एकातिर यी तीन नेताको स्वभावले पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । अर्कोतिर पद पाए पनि काम नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । नयाँ शक्तिभित्र सहसंयोजकहरु फिल्डमा नजाने र कार्यलयमा मात्र रहने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चाहिँ सबै प्रदेशमा लगेर सह–संयोजकहरुलाई ‘प्रोजेक्ट’ गराएका छन् । ‘सह–संयोजक बनेर बाबुरामले जहाँ जहाँ देखाउनुपर्ने हो त्यहाँ लगेका छन् । अब काम गर्ने कि नगर्ने सह–संयोजकको जिम्मा हो’ उनले भने ।
भदौ ४ गते दिउँसो १ नम्बर प्रदेशका संयोजक पासाङ शेर्पाले काठमाडौंमा बसेर राजनीति गरिरहेका नयाँ शक्तिका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै फोटो राखेर फेसबुकमा लेखे, ‘गाउँगाउँमा पार्टीको सङ्गठन बनाउन जानुपर्छ, अनि यस्तै रमाइलो हुन्छ । काठमाडौंमा कोचिएर बसेर के काम ? लोकेसन धनकुटा हिले बजार ।’
विधानले नै कामविहीन बनायो
नयाँ शक्तिका सह–संयोजकलाई विधानले नै कामविहीन बनाएको छ ।
नयाँ शक्तिको विधानको भाग–१३ को ‘च’ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा छ ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सङ्घीय समितिको गठन नभएसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यकारी समितिको संयोजकलाई राजनीतिक सहकार्यको निम्ति केन्द्रीय कार्यकारी समितिले केन्द्रीय संयोजकको अलवा आवश्यक सहसंयोजकहरु र सदस्य रहने गरी विशेष राजनीतिक समिति गठन गर्नेछ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।’
यो व्यवस्थासहितको अन्तरिम विधान पारित भएपछि नयाँ शक्तिको गत असार १० देखि १४ गतेसम्म सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको वैठक संयोजक भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको थियो । वैठकमा मुख्य सात एजेन्डा १– पार्टी स्थापना राष्ट्रिय भेलाको समीक्षा, २– विधान प्रतिवेदनसहितका राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजहरुको अनुमोदन, ३– सङ्गठन निर्माण, ४– कार्यविभाजन, ५– तात्कालिक कार्ययोजना, ६– आर्थिक प्रतिवेदन र ७–विविध थिए ।
कार्यविभाजनको एजेन्डा अनुसार केन्द्रीय कार्यकारी समितिको गठन गरियो । पारित अन्तरिम विधान अनुरुप अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्को सचिवालयलाई केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा रुपान्तरण गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्यकारी समितिको सङ्ख्या ९९ नबढ्ने गरी महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सदस्य थपिएको थियो ।
यहीँनेर केन्द्रीय कार्यकारी समितिको सह–संयोजकमा रामचन्द्र झा, महेश कर्मोचा र दुर्गा सोवलाई बनाइयो । विधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका आधारमा सहसंयोजक बनाइए पनि उनीहरुको कार्यकारी भूमिका केही छैन । बरु उक्त वैठकले भट्टराई संयोजक रहेको राजनीतिक समिति पनि बनायो । यसमा सहसंयोजकत्रय झा र कोर्मोचा र सोवलाई सदस्य बनाइयो । तर अहिले यो समितिको आकार पनि बढेको छ ।
उनीहरुको काम अहिले बाबुरामलाई परामर्श दिनेबाहेक केही छैन । यो राजनीतिक समितिको ‘काम, कर्तव्य र अधिकारी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम हुनेछ’ भन्ने विधानमा रहेको व्यवस्थाले सहसंयोजकहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइदिएको छ ।
विधानले नै काम नदिएपछि ती तीन नेता पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । नयाँ शक्तिमा उनीहरुका बारेमा चर्चा हुन्छ, ‘उहाँहरुलाई पद र कुर्सी मिलेको छ, काम चाहिँ मिलेको छैन ।’ सयोजक भट्टराईले सङ्गठन निर्माणका लागि देशदौडाहमा जाँदा सहसंयोजकहरुलाई पालैपालो लिएर गएका हुन्छन् ।
नयाँ शक्तिले जेठ ३० मा पार्टी घोषणपछि सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्ययोजना तयार गरेको थियो । त्यसै अनुसार साउन २२ सम्ममा सो पार्टीले देशभर प्रशिक्षण सकेको छ । नयाँ शक्तिले साउन ३ गते काठमाडौंमा ३ नम्बर प्रदेशको, साउन ५ मा जनकपुरमा २ नम्बर प्रदेशको, साउन ८ मा पोखरमा ४ नम्बर प्रदेशकको, साउन १२ मा सुर्खेतमा ६ नम्बर प्रदेशको, साउन १४ मा धनगढीमा ७ नम्बर प्रदेशको, साउन १६ मा घोराहीमा ५ नम्बर प्रदेशको र साउन २२ मा विर्तामोडमा १ नम्बर प्रदेशको प्रशिक्षण गरेको थियो । ती कार्यक्रममा संयोजक भट्टराई र सह–संयोजक पुगेका थिए ।
नयाँ शक्तिमा सहसंयोजक बनाउने विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । अन्तिममा बाबुरामको एकल चाहना र प्रस्तावित व्यक्तिको रुचिमा सहसंयोजक बनाइएको थियो ।
नयाँ शक्तिको केन्द्रीय कार्यकारी समितिका एक सदस्यका अनुसार सहसंयोजक तोक्ने गरी बसेको गत असार १० देखि १४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय सचिवालयको वैठकमा बहुमत मात्र होइन, ९५ प्रतिशत सहभागी सहसंयोजक बनाउन नहुँने पक्षमा थिए ।
तर संयोजक भट्टराईले शीर्ष नेतासँगको कुराकानीमा ‘अहिले क्लस्टरका आधारमा सहसंयोजक नतोके परिस्थिति ठीक नहुँने तर्क राखेपछि’ सह–संयोजक बनाउने निर्णय भएको थियो । मधेस, महिला, र जनजाति समुदायबाट सहसंयोजक बनाइए पनि खस आर्य समूहबाट भने कसैलाई संयोजक बनाइएको थिएन् ।
नयाँ शक्तिले समावेशीमा तराई–मधेस, आदीवासी–जनजाति तथा खस–आर्यको क्लस्टरलाई अगाडि बढाएको छ । यसैका आधारमा तराई–मधेसबाट एमाले पृष्ठभूमिका रामचन्द्र झा सहसंयोजक बने, आदिवासी–जनजातिबाट काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका महेश कोर्मोचा सहसंयोजक बनेका थिए । खस–आर्यको क्लस्टर कोही पनि सहसंयोजक बनेनन् । दलित र महिलाबाट एनजीओकर्मी दुर्गा सोव सहसंयोजक बनिन् । कोर्मोचाका बारेमा कम विवाद भए पनि झा र सोवका विषयमा भने ठूलो विवाद देखियो । संयोजक भएलगत्तै सेवा पार्टी काम छाडेर अमेरिकातिर लागेकी थिइन् । जुन विषय पार्टीभित्र विवादमा परेको थियो ।
सङ्गठनमा आफूले धेरै मिहिनेत गरे पनि सहसंयोजक बनाउने बेला बाबुरामले अगाडि नसारेकामा देवेन्द्र पौडेलको पनि असन्तुष्टि थियो । रामेश्वर खनाल र मुमाराम खनालका पनि सहसंयोजकमा दाबी थियो । अहिले पौडेले सङ्गठन विभाग प्रमुख छन् भने मुमाराम राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक र रामेश्वर आर्थिक व्यवस्थापन तथा सुशासन विभागका संयोजक छन् ।
त्यसबेला बरियताले पनि नयाँ शक्तिमा विवाद देखिएको थियो । जस्तो कि १ नम्बरमा राजनीतिक समिति छ, जहाँ संयोजक भट्टराई आफै तथा सहसंयोजकहरु थिए । त्यसपछि २ नम्बरमा राष्ट्रिय मामिला संयन्त्र छ र यसको संयोजकमा परशुराम तामाङ छन् । तेस्रोमा अनुशासन आयोग छ र यहाँ संयोजकमा परशुराम खापुङ छन् । चौथोमा राजनीतिक संवाद समिति छ र यहाँ संयोजक मुमाराम खनाल छन् । चारवटा विभागपछि मात्र सङ्गठन विभाग बनाइएको छ । यो विभागमा संयोजक देवेन्द्र पौडेल छन् । अहिले ३४ वटा विभाग बनेका छन् । पार्टी निर्माणमा सङ्गठन विभाग अगाडि भए पनि बरियतामा पछाडि राखिएको विषयमा पनि नयाँ शक्तिभित्र समस्या देखापरेको थियो ।
नयाँ शक्तिमा सङ्गठन विस्तारसँगै अन्तरविरोधहरु पनि बढ्न थालेका हुन्, मूलत सङ्गठनका क्षेत्रमा । राजनीति पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुलाई दिइएको भूमिकाका विषयलाई लिएर बाबुराममाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पार्टी निर्माणदेखि सङ्गठन विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई भन्दा अवकास प्राप्त, पैसा भएका र सेलिबे्रटी बाबुरामको रोजाइमा परेको गुनासो नयाँ शक्तिभित्र उठ्न थालेको छ ।
त्यसबेला कार्यविभाजनका विषयमा अरु पनि विवाद देखिएका थिए । विदेश विभागलाई फुटालिएको थियो । त्यसप्रति पनि नवराज सुवेदी असन्तुष्ट थिए । पहिला सुवेदीको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय विभाग थियो । अहिले कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय हेर्नेगरी हिसिला यमीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग बनेको छ भने सुवेदीको नेतृत्वमा विदेश÷प्रवास शाखा हेर्ने विभाग बनाइएको छ, जसलाई प्रदेश सरहको जिम्मा दिइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा मात्र सहसंयोजकको परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ शक्तिको अन्तरिम विधानको भाग–६ मा कार्यकारी समिति, परिषद् र वैधानिक अङ्गहरुबारे उल्लेख छ । जहाँ सङ्घीय समितिमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–५, महासचिव–१, सचिव–५ र कोषाध्यक्ष–१ गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारीसहित १५१ सदस्य हुने उल्लेख छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि यो लागू हुने भएकाले यहाँ सहसंयोजकहरुको भूमिका केही राखिएको छैन ।
विधानको भाग ७ मा पदाधिकारीको काम कर्तव्य राखिएको छ । जहाँ अध्यक्षपछि उपाध्यक्ष र त्यसपछि महासचिवको कामको जिम्मा छ । सहसंयोजक उल्लेख छैन । यो पनि महाधिवेशनपछिको परिकल्पना भएकाले यहाँ सहसंयोजकहरुको भूमिका नराखिएको हो ।
उता प्रदेश संयोजकहरु भने खुसी नै छन् । तर उनीहरु फिल्डमा थोरै जाने गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरु प्रायः काठमाडौँमा बसेर राजनीति गरेका व्यक्ति रहेको आरोप लागेको छ । हाल १ मा पासाङ शेर्पा, २ का महेन्द्र पासवान, ३ का गङ्गानारायण श्रेष्ठ, ४ मा वलावती शर्मा, ५ मा सुरेन्द्र चौधरी, ६ माभक्तबहादुर शाह र ७ मा लीलादेवी भण्डारी संयोजक हुन् । अहिले असन्तुष्टहरु महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर सङ्गठनमा बलियो स्थानमा जाने मुडमा देखिएका छन् । ‘अहिले सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने र महाधिवेशनबाट आफ्नो हैसियत देखाउने नै अबको राजनीति हुन्छ ।’ असन्तुष्ट एक नेताले भने ।
सहसंयोजक रामचन्द्र झा भन्छन्– कार्यकारी भूमिका माग्छु
–अहिले विधानको कुराभन्दा पनि कार्यविभाजन तोक्ने हो । चाँडै नै वैठक बस्दैछ । त्यहाँबाट कार्यविभाजन हुन्छ । सहसंयोजक भएपछि विभिन्न प्रदेशमा गएर राष्ट्रिय भेलाको भाव प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइयो । केही जिल्लाहरुमा पनि गइयो ।
–राजनीतिक समिति छ । कहिलेकाहीँ त्यसको वैठक पनि बस्छ । पहिला यो समितिमा चार जना थियौँ । अहिले १६÷१७ जना पुगेको छ । अबको वैठकमा कार्यकारी भूमिका दिनुस् भनेर माग गर्छु ।
दुर्गा सोव भन्छिन्– सशक्त भूमिका मागेकी छु
–मलाई पार्टीले सहसंयोजकको जिम्मा दिएपछि पार्टीका आन्तरिक भेला र वैठकहरु सुरु भएका थिए । म राष्ट्रिय भेलाको भाव सम्प्रेषण गर्ने प्रदेश तहका प्रशिक्षणमा गएँ ।
–संयोजक र हामी सहसंयोजकहरु त्यहाँ गयौँ । व्यक्तिगत हिसाबले मैले पनि भूमिका पुगेन कि भन्ने महसुस गरेकी छु । भूमिका शसक्त भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
–भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा संयोजकसँग कुरा गरेकी छु । अवको वैठकमा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा भएको छ । वैठक बसेपछि केही निर्णय होला ।